नामिबियाविरुद्धको एकदिवसीय सिरिज स्थगित
काठमाडौँ । नेपालले नामिबियामा खेल्ने भनिएको एकदिवसीय सिरीज स्थगित भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण नेपालले खेल्ने आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईअन्तर्गतको नामिबिया त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित भएको हो । विस्तृतमा
रियल मड्रिडको घरेलु मैदानबाट स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिने
बार्यन म्युनिख र डर्टमण्डले खेलाडीको पारिश्रमिक कटौति गर्ने
मेसीले सन् २०१९ मा १ सय २१ मिलियन युरो कमाए, रोनाल्डोले कति ?
पहिलो हाफमा मेक्सीकोले गर्यो १ गोल, जर्मनी दवावमा
काठमाडौं । डिफेन्डिङ च्याम्पियन जमर्नी पहिलो हाफमा १–० गोलले पछि परेको छ । खेलको ३५ औं मिनेटमा आर्भिङ लोजानोको गोलमा मेक्सीकोले अग्रता लिएको हो ।
कोलारोभको उत्कृष्ट फ्रि-किकमा सर्बियाले कोस्टारिकालाई १–० गोलले हरायो
काठमाडौं । युरोपियन देश सर्बियाले कोस्टारिकालाई पराजित गरेको छ । विश्वकपको समूह ‘सी’को पहिलो खेलमा कोस्टारिकालाई सर्बियाले १–० गोलले पराजित गरेको हो ।
ब्राजिल र स्वीजरल्याण्डबीचको खेलमा कसले मार्ला बाजी ? नेपाली ज्योतिषले गरे यस्तो भविष्यवाणी...
आज बेलुका ब्राजिल र स्वीजरल्याण्डबीचको खेल हुँदैछ । सन् २०१४ को विश्वकपमा जर्मनीसँग ७ गोल खाएको ब्राजिलको यसपटकको विश्वकप यात्रा कस्तो हुनेछ ?
जब आफ्नै मिल्ने साथीहरुले यस्तो हर्कत गरे
मेसीलाई असहज महसुस, विश्वकपमा आइतबार तीन खेल हुने
मस्को । अर्जेन्टीनाका विश्वचर्चित खेलाडी नियोनल मेसीले आफ्नो समूहलाई विजयी गराउन नसकेकोमा असहज महसुस गरेका छन् ।
अन्तिम पटक जर्मनी सामु घुडाँ टेकेको ब्राजिलको स्वीजरल्याण्डविरुद्धको खेल कस्तो होला ?
एजेन्सी । रुस विश्वकपको सूरुवात गर्दा ब्राजिलले चार बर्ष अगाडी घरेलु भुमिमा जर्मनसंग ब्यहोरेको हारको पीडा अब बिर्सिएको हुनुपर्छ ।
कोस्टारिकालाई हराउँदै अनपेक्षित नतिजा ल्याउने दाउमा सर्बिया
काठमाडौं । रसिया विश्वकपको चौथो दिनको पहिलो खेलमा आज दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिका र यूरोपियन राष्ट्र सर्वियाबीच समूह चरणको खेल हुँदैछ ।